Semalt: Plugins WordPress ho an'ny tranonkala fitantanana
Ny fanombohana amin'ny tsenan'ny plugin WordPress dia iray amin'ireo fanamby sarotra ho an'ny mpandrindra. Sarotra be ny mahita ny fidirana, saingy azonao atao ny miala amin'ny fifaninanana amin'ny toro-hevitra vitsivitsy. Ny zavatra manan-danja indrindra tokony hataonao dia ny fampivelarana ny dikan'ny plugins izay sady mahasoa ny tranokalanao. Ny plugin iray tena tsara dia mampiseho ny mpampiasa sy ny mpamorona anao fa mitazona ny tranokalanao isan'andro ary manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny habaka.
Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana iombonana [[sokajy: Endrika: xpn]] [[Catégorie:
Amin'ny maha-webmaster na mpitoraka blaogy anao, fantatrao fa ny habetsahan'ny fanehoan-kevitra momba ny spam dia mitombo ao amin'ny aterineto ary tsy misy fomba mety hanesorana ireo fanehoan-kevitra amin'ny spam. Soa ihany fa manana ny tranokala Antispam Bee isika, izay eritreritra mipoitra sy miavaka. Ity plugin maimaim-poana ity dia mametraka ny tsikera momba ny spam ary dia natokisan'ny olona an-jatony an'arivony ao amin'ny aterineto. Tsara ho an'ny fampiasana ara-barotra sy tsy miankina ary tsy mandany vola be ianao. Raha tsy manana fahafahana miditra amin'ny Akismet ianao noho ny antony tsy fantatra, ity plugin ity dia mety aminao.
Ity WordPress plugin ity dia iray amin'ny tsara indrindra ho an'ny fikojakojana ny tranokala. Jetpack dia tsy malaza toy ny plugins hafa, fa tsara ny fifanarahana. Izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny asan'ny tranokalanao..Jetpack dia katsahin'ireo karazana ilaina sy mahaliana izay azonao miankina amin'izany. Ireo hevi-dehibe dia ahitana ny tatitra momba ny fampahalalam-baovao mahazatra, ny famoahana an-tserasera, ny fanampiana amin'ny fisafidianana sary ary loha-hevitra an-tserasera.
Raha kivy noho ny haingam-pandeha misy ny tranokalanao ianao ary tsy manana tahiry backup, tokony hanandrana Duplicator ianao. Io no iray amin'ireo WordPress plugins tsara indrindra sy azo itokisana ho an'ny fikojakojana ny tranokala. Ny dipilavatra dia ahafahanao manao tahiry backup amin'ny toe-javatra mitranga ary mamela anao manova ny angona avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny hafa tsy misy olana. Mila mametaka ity plugin ity ianao ary ataovy mora kokoa sy haingana kokoa ny asanao.
Ny Fijerena ny Theme dia manampy anao handinika raha efa eo amin'ny toerany ny lohahevitry ny tranokalanao ary araka ny fenitra WordPress na tsia. Io no plugin ampiasaina amin'ny mpampiasa Wordpress.org ary manampy amin'ny fanandramana ny loha-hevitrao momba ny fandraisana an-tserasera ary manangona antontan-drakitra maro ho anao.
Fanavaozana ny tranokalan'ny WordPress raha tsy misy plugin dia mety ho olana, indrindra rehefa mampiasa tranokala hafa ianao amin'ny fotoana iray. Miaraka amin'ny Easy Updates Manager, mora ho anao ny mifehy ny tranonkala maro, ny lohahevitra, ny votoatiny ary ny plugins amin'ny fotoana iray. Ny ampahany tsara indrindra dia ity plugin ity dia mora sy mora ampiasaina ary azo alaina avy amin'ny Internet. Raha vao tafapetraka dia afaka mampiasa ity plugin ity ianao mba hamoronana rakitra backup maro ary afaka mifehy ny tranokala na blôginao samihafa.
Yoast SEO dia iray amin'ny WordPress plugins tsara indrindra sy be mpampiasa hatramin'izao. Manana endri-javatra be dia be izy ary ampiasain'ny mpikirakira web na bilaogera. Ny endri-javatra voalohany dia ny fampivoarana ny sitemap XML, ny fampidirana ireo lohatenin'ny SEO, ny fanoritsoritana ary ny penis ao amin'ny tranokalanao Source .